Kuwani waa labaatanka hay'adaha amaahda cusub ee ku yimaada Apple Pay | Wararka IPhone
Ku soo dhawow adduunka Apple Pay, nidaamka lacag-bixinta taleefanka gacanta ee aan lala xiriirin ee Apple ay u diyaarisay qayb yar oo ka mid ah dadka isticmaala. Yar waxaan ula jeednaa isticmaaleyaasha ka yimid dibedda Mareykanka, maxaa yeelay gudaha dalka Mareykanka waxay bixiyaan tiro hay'ado deyn ah oo ka baxsada gacmaheena. Dhanka kale, gudaha Isbaanishka waxay sii wadaan inay ilaaliyaan doorbidida Carrefour Pass iyo Banco Santander oo ah alaab-qeybiyeyaasha kaliya.
Intaa waxaa dheer, kuuma aanan sheegin natiijooyinka Apple Pay sida ku cad macluumaadka ugu dambeeyay ee shirkadda Cupertino ay la wadaagtay, wax aan aad ugu badnayn caadada caadiga ah ee sirta. Sababtoo ah, Apple Pay ayaa koray wax aan ka yarayn 450% intii lagu jiray 2016.
Sababtaas awgeed Ma jiraan wax yar oo ka mid ah dadka isticmaala Apple ee ku nool Isbaanishka kuwaas oo u hanqal taagaya Apple Pay inay albaabada u furaan hay'adaha kale ee maaliyadeed Dhanka kale, Mareykanka ayaa sii wadaya inuu kudarsado lamaanayaal cusub lacagaha mobilada.
Marka laga hadlayo dalkeena, bangiyada ayaa wali ku lug leh bilaabista nidaamyadooda dirista iyo helitaanka lacagaha sida Bizum, oo aan meelna u dhaafin. Waxaan rajeyneynaa inta lagu gudajiray WWDC ee sanadkan 2017, isla meeshii uu kahadlay Tim Cook sanadkii hore ee ku saabsan Apple Pay ee Spain, inay nooga tagi doonaan macluumaadka la xiriira mar kale, Ma isticmaashaa Apple Pay mise miyaad doorbideysaa hababka kale ee lacag bixinta?
Hay'adaha cusub ee amaahda
• Ururka Xiriirka ee Connexus
• Waaxda Ganacsiga Midowga Amaahda Federaalka
• Bangiga ugu horeeya ee Blue Earth
• Bangiga Qaranka ee ugu horreeya ee Pana
• Markii Ugu Horaysay ee Amaah Bulshada Mareykanka
• Bangiga dhaxalka
• Bangiga Manasquan
• Suuqa Suuqa Mareykanka ee Suuqa Suuqa Mareykanka
• Amniga Bangiga Dawada ee Hibbiska
• Ururka Skyward Credit Union
• Bangiga Bennington
• Bankiga 1aad ee dastuurka
• Bangiga Cashton
• Bangiga New Mexico
• BankStar Maaliyadeed
• Bangiga Dhexe ee Qaranka & Hay'adda Trust
• Ururka Chevron Federal Credit Union
• Bangiga Bulshada Citizens
• Laba Webi Bulsho
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Kuwani waa labaatanka hay'adaha amaahda cusub ee ku yimaada Apple Pay
Waa inaad ku qeexdaa cinwaanka halka ay ka soo jeedaan, in ka badan wax walba si aanan u niyad jabin markaan aqrino maqaalka
Waxaan ku isticmaalaa  bixinta kaarka baasaboorka ee Carrefour waana ku faraxsanahay sababo badan laakiin runta ayaa ah inaan jeclaan lahaa inaan ku isticmaalo kaarka hay'ad aan waqtigan la jaan qaadi karin. 6 bilood ka dib markii aan gaarnay Spain waxaan la mid nahay maalinta koowaad
Uma isticmaalo sababtoo ah bangigayga macquul uma ahan Ing Direct. Xilliga ay suurta gal tahay (haddii maalintu timaado) waan isticmaali doonaa
Waa kuwan liiska bangiyada cusub ee bixiya mushaarka tufaaxa ee Spain:
Waxaan u isticmaalaa wax badan maalin kasta waxayna umuuqataa FANTASTIC! Super Suuban, RAAXO LEH OO AMMAAN AH. Waxaan rajeynayaa inay ku sii socoto Spain iyo inay gaarto bangiyada kale, oo ay ku jiraan ING.
Chameleon Run, si bilaash ah uga soo dejiso barnaamijka Apple Store